Ahh - Intelezi emnandi ye-adobe eduze kwe-Pecos Wilderness - I-Airbnb
Ahh - Intelezi emnandi ye-adobe eduze kwe-Pecos Wilderness
Pecos, New Mexico, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Haila
U-Haila Ungumbungazi ovelele
Amamayela angu-26 kuphela ukusuka e-Santa Fe, e-Casa Dulce ukumema ukuthi ubuyele emuva ngesikhathi. Indlu ye-adobe eyakhiwe ngokwezifiso yango-1936, igumbi elilodwa lokulala, ezobuciko nezobuciko, itholakala onqenqemeni lwehlane le-rustic Hispanic Village of Pecos. Nethezeka futhi ujabulele ukudla kwakho kuvulandi oskrinwe emuva. Ikhishi lihlinzekwa ngezinto eziyisisekelo zokupheka. Hlola i-Pecos National Monument, qwaba noma udobe noma ushayele e-Pecos Wilderness. Indawo ekahle yokubaleka kanye ne-Santa Fe plaza iqhele ngemizuzu engama-30 kuphela.
Sicela ubheke isivinini sakho uma ushayela e-Pecos njengoba amaphoyisa kahulumeni aziwa ngokucupha izicupho ze-radar. Umkhawulo wejubane ngu-25 mph e-Pecos.
Zama ukwenza isikhathi sokushayela e-Pecos Wilderness ngenkathi ulapha.
4.96 · 131 okushiwo abanye
I-Camino Rincon iwumgwaqo ojwayelekile, womzila owodwa oseNyakatho neNew Mexico. Omakhelwane izinhlobonhlobo zabantu abalungile okuhlanganisa nezinhlamvu ezimbalwa impela. I-Casa Dulce kwaba yindlu yokuqala emgwaqeni enogesi ngo-1936. Ibilokhu iyindawo yokuhlangana nakuba incane ngosayizi ngenxa yokuthi inkulu ngesimilo futhi iyathandeka.
Ngihlala e-Santa Fe futhi ngingathanda ukuhlangana nawe uma ngifisa. Ngizoza e-Pecos noma singahlangana e-Santa Fe. Udadewethu, uSara, uhlala ngqo ngaphesheya komgwaqo futhi angakujabulela ukukusiza. Uhlala e-Pecos ngokugcwele futhi angakusiza nganoma imiphi imibuzo noma okukukhathazayo.
Ngihlala e-Santa Fe futhi ngingathanda ukuhlangana nawe uma ngifisa. Ngizoza e-Pecos noma singahlangana e-Santa Fe. Udadewethu, uSara, uhlala ngqo ngaphesheya komgwaqo futhi angaku…
UHaila Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Pecos namaphethelo